IKPURUTA NA NWA OBODO - MAKA Ndi Nde
IKPUKWU NA IWU DINTA
Uru Nrube isi
Gbaa mbọ hụ na mkpebi enyere gị
Na-eme ka ahia ahia ghara ịbanye
Na-eme ka ọgbụgba dị ọcha
Na-ezere ọgụ iwu
Na-ezere mfu ego
Ngwa ngwa ngwa ahụmịhe nke afọ
Nkwanye ugwu anyị na ndi otu anyị kwesiri ịrụ N'ụwa niile nwere nka dị ukwuu na asambodo, ụtụ isi, akụnụba na echiche ịtụnanya, maka ịdị larịị. Dịkwa ka o siri dị anyị mkpa, anyị nwere ahụmịhe bara uru na ọrụ azụmaahịa dị mkpa iji chọpụta nsogbu dị n'etiti ụlọ ọrụ yana ọkwa dị iche iche nke ụlọ ọrụ ma tulee ihe ndị metụtara ụwa niile na-emetụta ụkpụrụ azụmahịa.
Anyị na ndị ahịa na ndị ndụmọdụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji zụlite ebumnuche, nnwere onwe nnwere onwe na ịdị uchu kwesịrị ahaziri maka igbo mkpa ndị ahịa. Anyị na-eweta akụkọ e mere iji gbochie nyocha nke ndị isi ụtụ, ndị na-enyocha, ụlọ ikpe, ndị mgbasa ozi na ndị ọzọ nwere mmasị.
N'ụwa niile, na-enwe nsogbu nchịkwa gburugburu na ihe mgbochi iwu na usoro iwu, azụmaahịa ndị metụtara ụlọ ọrụ na-emezigharị ihe, Njikọ ahịa na Nnweta, Mmalite, nnukwu ọrụ, ọrụ ịtụgharị, mbupụ na mbubata niile na-eche ihe ịma aka dị iche iche na nrube isi ụzọ nke obe. -emeghari mmeghari nke ndi oru, nguzobe nke azumahia, mgbasawanye na obughi odi nma na nbibi. Nde Ndị na-eme nde na-enye ndụmọdụ na nkwado maka ụlọ ọrụ nha niile na nrube isi na ịdị uchu kwesiri ya.
Maka njikota na nnweta na idozigharị ụlọ ọrụ
Nchịkọta n'oge jikọtara ọnụ na nnweta, ụzọ ọnụnọ ya na ụdị ọrụ mmezigharị ụlọ ọrụ a na-elekwasịkarị anya na “nnukwu foto” na ibelata ihe egwu ego - na-elegharakarị oke mkpa nke nnabata. Mgbanwe ụlọ ọrụ na-enweghị nyocha zuru oke banyere mmetụta mbata ọpụpụ nwere ike ibute mkparịta ụka dị ukwuu maka ndị ọrụ dị mkpa yana ihe ịga nke ọma nke njikọ ahụ. Nde Ndị na-eme nde na-enyere ndị ahịa aka ịgagharị akụkụ metụtara ọpụpụ nke ihe omume ụlọ ọrụ kemgbe ọtụtụ iri afọ. Nyocha anyị ruru nke ọma gụnyere nyochacha ọnọdụ mbata na ọpụpụ, mkpebi mmetụta na njikwa ọrụ ndị mbata na ọpụpụ mbata na ọpụpụ.
Maka Nkwado Na ntanetị
Companieslọ ọrụ ụlọ ọrụ gburugburu ụwa na-achọkarị ngagharị nke ọtụtụ ndị ọrụ n'otu oge, na-ewetara ihe ịma aka dị iche iche dabere na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, ọrụ ha na nzere ha, na mba ndị metụtara. Anyị nwere ike isoro gị rụọ ọrụ na-arụ ọrụ iji nye gị ndụmọdụ banyere ịnọgide na-agbaso na iwu mbata na ọpụpụ nke obodo. Na mmekorita gi, anyi nwere ike iwulite mmemme omume nke oru dika ikpa na ihe ndi ozo di iche iche si di, na enyere gi aka inogide n’uzo ma mezuo ebumnuche gi.